I-OpenSearch 1.0 iza nokusekelwa kwe-ARM64, ukuthuthuka kusixhumi esibonakalayo sewebhu nokuningi | Kusuka kuLinux
Emasontweni adlule, I-Amazon imemezele ukwakhiwa kwe- ebizwa ngokuthi indawo yokucinga "I-OpenSearch" okwenze imfoloko kusuka Islastiki ye-7.10.2 futhi ngokusemthethweni ikhodi eyimfoloko ihlanzwe yezingxenye ezingasabalaliswanga ngaphansi kwelayisense le-Apache 2.0 kwathi izinto zomkhiqizo we-Elasticsearch zathathelwa indawo yi-OpenSearch.
Kulabo abangajwayele i-OpenSearch, kufanele wazi ukuthi lokhu izothuthukiswa njengephrojekthi yokusebenzisana ithuthukiswe ngokuhlanganyela komphakathi. Kuyaziwa ukuthi i-Amazon njengamanje ingumgcini womsebenzi, kepha ngokuzayo, kanye nomphakathi, kuzokwakhiwa isu elilungile lokuphatha, ukwenza izinqumo nokuxhumana kwabahlanganyeli ababambe iqhaza entuthukweni.
Iphrojekthi ye-OpenSearch iphinde yaqhubeka nokwakhiwa kwe-Open Distro ukusatshalaliswa kwe-Elasticsearch, eyayakhiwe phambilini e-Amazon ngokuhlangana ne-Expedia Group ne-Netflix ngendlela ye-plug-in ye-Elasticsearch. Ikhodi isatshalaliswa ngaphansi kwelayisense le-Apache 2.0.
Mayelana ne-OpenSearch version 1.0
I-Amazon yethule uhlobo lokuqala lwephrojekthi ye-OpenSearch 1.0 lapho singaboni khona kuphela lokho kwe-OpenSearch ivela njengephrojekthi yokubambisana iqhutshwa ngumphakathi, nezinkampani ezinjengeRed Hat, iSAP, i-Capital One, neLogz.io sezivele zijoyina lo msebenzi, kepha le nguqulo engu-1.0 isivele ithathwa njengefanele ukusetshenziswa ezindaweni zokukhiqiza.
Kuyasithokozisa ukuhlanganyela ukuthi iphrojekthi ye-OpenSearch ifinyelele ibanga elibalulekile ngokukhishwa kwe-OpenSearch 1.0. Le ngqophamlando iphawula uhlobo lokuqala olulungele ukukhiqizwa lwe-OpenSearch. Ngaphezu kokulungiswa komkhiqizo, kunezelwe izithuthukisi ezimbalwa ezintsha kule phrojekthi: ukuhamba kwedatha, ukuhlunga kwemilenze yokuhlaziya yokulandela, ukuhlela amasheya, nokuningi.
Uhlobo olusha lwe-OpenSearch 1.0 kufaka phakathi injini yokusesha nokugcina I-OpenSearch, i- Isixhumi esibonakalayo sewebhu se-OpenSearch Dashboards kanye nemvelo yokubona idatha, kanye neqoqo lama-plugins anikezwe kuqala kumkhiqizo we-Open Distro we-Elasticsearch futhi esikhundleni sezinto ezikhokhelwayo ze-Elasticsearch.
Isibonelo, i-Open Distro ye-Elasticsearch inikeza ama-plug-ins wokufunda ngomshini, ukwesekwa kwe-SQL, ukukhiqizwa kwesimangalo, ukuxilongwa kokusebenza kweqoqo, ukubethela kwethrafikhi, ukulawula ukufinyelela okusekelwe endimeni (i-RBAC), ukuqinisekiswa kwe-Active Directory, iKerberos, i-SAML ne-OpenID. ukungena ngemvume ekuthunyelweni (i-SSO), nokungena ngemvume okuningiliziwe kokucwaningwa kwamabhuku.
Phakathi kwezinye izinguquko (ngaphezu kokuhlanzwa kusuka kwikhodi yokuphathelene, ukuhlanganiswa ne-Open Distro ye-Elasticsearch nokufaka izinto zohlobo lomkhiqizo we-Elasticsearch nge-OpenSearch) singathola ukuthi kule nguqulo entsha iphakethe yenzelwe ukunikezela ushintsho olubushelelezi kusuka ku-Elasticsearch kuya ku-OpenSearch.
Ngaphezu kwalokho kubhekwe nokuthi I-OpenSearch 1.0 inikeza ukuhambisana okuphezulu kwezinga le-API Futhi ukuhambisa amasistimu akhona ku-OpenSearch kufana nokuthuthukela kunguqulo entsha ye-Elasticsearch.
Kuyaziwa futhi ukuthi ingeziwe ukusekelwa kokwakhiwa kwe-ARM64 kwepulatifomu ye-Linux, ngokungeziwe ezintweni eziphakanyiswayo zokufaka i-OpenSearch ne-OpenSearch Dashboard kumikhiqizo nezinsizakalo ezikhona.
Isibonisi sewebhu singeze ukusekelwa kokugeleza kwedatha, okukuvumela ukuthi ulondoloze ukusakazwa kwedatha okuqhubekayo ngokufika kochungechunge lwesikhathi (izingxenye zamanani wepharamitha eboshelwe isikhathi) kwizikhombo ezahlukahlukene, kepha ngokwazi ukucubungula njengenamba ephelele (kubhekiswa emibuzweni ngegama lensiza elijwayelekile).
Kunikezwe amandla wokwenza ngokwezifiso inombolo ezenzakalelayo yama-shards ayisisekelo enkomba entsha.
KuTrace Analytics, ukungezwa kokunikeza nokuhlunga izimfanelo zeSpan kungeziwe.
Ukusekela ukukhiqiza imibiko ngesheduli kanye nemibiko yokuhlunga ngabasebenzisi.
Ekugcineni, kulabo abanentshisekelo yokwazi okwengeziwe ngale nguqulo entsha ekhishiwe, bangaxhumana nemininingwane Kulesi sixhumanisi esilandelayo.
Ukubamba iqhaza ekwakhiweni kwe-OpenSearch, akudingekile ukuthi usayine isivumelwano sokudluliswa kwamalungelo empahla (i-CLA, Isivumelwano Samalayisense Abahlanganyeli), nemithetho yokusebenzisa uphawu lwentengiso lwe-OpenSearch iyakuvumela futhi ikuvumela ukuthi ucacise leli gama lapho ukhangisa imikhiqizo yakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » Izaziso » I-OpenSearch 1.0 iza nokusekelwa kwe-ARM64, ukuthuthuka kusixhumi esibonakalayo sewebhu nokuningi
I-Debian 11 Bullseye: Ukubheka okuncane ekufakweni kwe-Debian entsha